Vivo energy-Asatana : hangotraka ny rallye Shell Helix 2017 | NewsMada
Vivo energy-Asatana : hangotraka ny rallye Shell Helix 2017
Par Taratra sur 28/09/2017
Manohana ny fikarakaran’ny fikambanana Asatana ny rallye Shell Helix ny orinasa Vivo energy. Anisan’ny mampiavaka azy ny fampiasana ny menaka motera.
Hatao ny 6, 7 ary 8 oktobra ho avy izao ny rallye Shell Helix, andiany faha 17. Fifaninanana hatao eto Antananarivo, karakarain’ny fikambanana Asatana (Association des sports automobile d’Antananarivo). Manohana mivantana ny hetsika ny Vivo energy Madagasikara, orinasa miara-miombon’antoka amin’ny toby fivarotan-tsolika Shell sy ireo vokatra ara-tsolika Shell helix. Tafiditra ao anatin’ity fifaninanana ity koa ny tapany fahenina amin’ny Championnat de Madagascar, taona 2017.
Anisan’ny miara-miombon’antoka amin’ny rallye Shell Helix koa ny orinasa Orange, Global motors Madagasikara (GMM), ny MakiCim, sns. Hatao eny amin’ny toerana manokana ao anatin’ny orinasa GMM eny Anosivavaka, ny fitiliana ara-teknika ny fiara mpifaninana ary hisy fanafanana ny lanonana amin’ny endriny samihafa.
Mampateza ny motera
Vokatra tena hamantarana ny marika Shell Helix ny menaka fanao amin’ny motera. Nalaina avy amin’ny gazy voajanahary, madio ary miaro sy mampateza ny motera sy ny fiara. Hita mandritra ny fifaninanana fiarakodia karakarain’ny Asatana hatrany ity vokatra ity.
Misy andiany telo ny fifaninanana. Miainga eny amin’ny orinasa GMM Anosivavaka, ary mitety ny manodidina an’Antananarivo. Anisan’izany ny eny Soavimasoandro, Anjomakely, Ambatolampy Tsimahafotsy, …. . Mitohy any Antanandrano, Ambohitrarahaba, mivoaka ny lalampirenena fahatelo (RN 3).
Eo koa ny eny Sabotsy Namehana, Manandriana, mivoaka any amin’ny lalampirenena faharoa (RN 2),…, Ambohimalaza, Anjeva, Ambohimanambola, …, Masindray, Alasora, …, mivoaka ny lalampirenena fahafito (RN 7) ary miverina indray avy eo. Mifarana eny Anosivavaka ny fifaninanana.